Qoyska- iyo hawlaha carruurta | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / Daganaanshaha dalka Iswiidahn / Qoyska- iyo hawlaha carruurta
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 27 10 2021
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay qoyska iyo hawlaha carruurta.
Waxaad akhrin doontaa wixii ku saabsan carruurta iyo dhalinyarada wakhti firaaqahooda iyo nooca fursadaha dhinaca dhaqan, isboorti iyo nolosha ururada ee jira. Waxaad xitaa ka fikiri doontaa nooca urur ee adigu aad dooni lahayd inaad ka mid ahaato.
Waxa kale oo aad akhrin doontaa wixii ku saabsan dugsiga xanaanada ee furan iyo hawlaha kale ee loogu talogalay kuwa ku jira fasax waalidnimo.
Xaqa loo leeyahay dhaqan iyo wakhti firaaqe firfircoon
Dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin inay helaan farshaxan, muusig, masrax, dhaansi, filim, suugaan iyo cilmi. Waxaad xitaa xaq u leedahay inaad ku dhaqanto dhaqan oo abuurto farshaxan. Haweenka iyo raggu waxay leeyihiin xuquuq isku mid ah inay keligood go’aansadaan nooca qaybaha nolosha dhaqanka ee ay doonayaan inay ka qaybqaataan.
Carruurtu waxay xaq u leeyihiin wakhti firaaqe firfircoon, leh ciyaar iyo hawlo wakhti firaaqe oo ku haboon ilmaha da’diisa. Carruurtu waxay xitaa xaq u leeyihiin inay helaan dhaqan iyo inay laf ahaantooda ku dhaqmaan dhaqan oo abuuraan farshaxan.
Dadka leh hoos u dhac awooda laxaadka ah waa inay awoodaan inay helaan nolol dhaqan oo ku dhaqmaan dhaqan leh shuruudo la mid ah sida dadka kale. Iswiidhan waxay saxeexday Qaramada Midooney qaraarkeeda xuquuqaha loogu talogalay dadka leh hoos u dhac awooda laxaadka ah.
Faayraska cusub ee koroona wuxuu ku faafay Iswiidhan oo qaybo kale oo badan oo aduunka ah dalal ayaa dhaqangeliyay xadayno. Waxay muhiim u ahaayeen in shacbiga laga ilaaliyo cudur ku faafa laakiin waxay xitaa dhibaato soo gaarsiisay waxyaabo ay ka mid tahay nolosha dhaqanka.
Hawlaha dadka ku jira fasaxa waalidnimo
Waxaa jira hawlo kala duwan oo aad samayn karto adigaaga ku jira fasaxa waalidnimo haddii aad doonaysid inaad la kulanto dad kale oo ku jira fasax waalidnimo.
Xanaanada caruurta ee furan waa goob kulan halkaas oo aad kula kulmi karto dadka kale ee waaweyn oo caruurtuna ka helayaan fursad ay la ciyaaraan caruur kale. Cid kasta waa lagu soo dhawaynayaa, adigu uma baahnid inaad ka hor isasii diiwaan-geliso oo waa bilaa kharash. Meelaha qaarkood waxaa laga helaa xanaanada caruurta ee furan ee ku jiheysan waalidka dalka ku cusub halkaas oo xitaa laga helayo fursada in la helo taageerada barashada iswiidhishka. Xanaanada caruurta ee furan waxaa maamusha degmada iyo xitaa kaniisado iyo ururo.
Hawlaha kale waxay ahaan karaan kulanka caruurta dhalaanka ah ee maktabada, maqaaxiyaha waalidka, tababarka caruurta dhalaanka ah iyo dabaasha dhalaanka.
Xarumaha ganacsiga ee wax laga iibsado qaarkood iyo dukaamada waaweyn waxaa laga heli karaa qolka qoyska ee naas-nuujinta. Halkaas waxaa xitaa laga helaa fursada in la fariisto oo la naas-nuujiyo, la badalo xafaayada oo raashinka ilmaha lagu diiriyo jawi degan.
Swiidhish leh canug yar
Adigoo maraya Swiidhish leh canugga yar waxaad la kulmi kartaa waaliddiin kale, waadna ku tababaran kartaan swiidhishka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Iswiidhish haysta cunug kuna qoran bogga intarnatka ee Iswiidhish haysta cunug.
Maxay u fiicantahay inay jiraan hawlo loogu talogalay waalidka, maxaad u malaynaysaa?
Carruurta iyo dhalinyarada wakhti firaaqahooda
Canuggu wuxuu xaq u leeyahay ciyaar, nasasho iyo xilli firaaqo. Xilli firaaqo oo micno leh wuxuu ahaan karaa mid taageero u noqda horuumarka canugga. Carruurta badankoodu waxaa ay ka helaan in ay saaxiibbo la joogaan xilliga firaaqada. Waa caadi in la isticmaalo intarneet, la daawado TV, lana dhegeysto muusiko. Qaar badan waxay ku hawlanaadaan hawlo si fiican u abaabulan.
Carruurta Swiidhan joogta badankoodu waxay mar uun noloshooda ka mid noqdaan urur isboorti. Ku dhawaad tiro isla eg oo wiilal iyo gabdho ah ayaa firfircoon. Ururrada isboortigu waa caadi da'aha oo dhan laakiin inta ugu badan ee isboortiga sameysa waxaa ay ku jiraan da'aadda 10-12-jir. Isboortiga caadiga ah waa kubbadda cagta, farda fuulidda, kubadda dhulka, teenis, isboorti dabaal ah, ciyaarta xeegada barafka, jineestikada, kubadda gacanta, kubadda kolayga iyo ciyaaraha fudfudud.
Isboortiga swiidhishku waa dhaqdhaqaaq dimuquraadi ah. Wuxuu ku dhisanyahay urur xubin ka noqosho halkaas oo xubnuhu ay dhiibayaan lacag xubinnimo. Hoggaamiyayaal badan oo ku jira isboortiga swiidhishku waxaa ay waalid u yihiin carruur ururka ku jirta. Hoggaamiyayaasha badankoodu waxaa ay shaqeeyaan mushaar la'aan. Waaliddiinta waxaa badanaa laga fishaa in hawlaha la xiriira isboortiga canugga ay wax caawiyaan.
Degmooyinka qaarkood waxaa laga hela kaydka wakhti firaaqaha halkaas oo carruurtu si bilaash ah uga amaahan karto qalabka isboortiga- iyo wakhti firaaqaha.
Akhri dheeraad ku saabsan Kaydka wakhti firaaqaha oo hel Kaydka wakhti firaaqaha kuugu dhow kuna qoran Kaydka wakhti firaaqaha boggooda intarnatka.
Dugsiga dhaqanku wuxuu carruurta iyo dhallinyarada siinayaa fursad ay uga qeyb qaataan hawlaha farshaxanka iyo dhaqanka, dugsiga ka bacdi.
Iskoolka dhaqanka wuxuu siiyaa caruurta iyo dhalinyarada fursada in laga qayb qaato barashada farshaxanka iyo hawl dhaqan ka dib iskoolka.
Maktabadda waxaa loogu tala galay dadka oo dhan. Xagga carruurta iyo dhallinyarada waxay maktabaddu badanaa u haysaa hawlo, ciyaaro iyo maaweelo. Badanaa waa la deynsan karaa kumbuyuutar leh intarneet, waana la deynsan karaa filmaan, ciyaaro iyo buugaag cod ah.
Akhris joogto ah wuxuu saameynayaa canugga awooddiisa hadal, u bislaashada dugsiga iyo natiijada dugsiga. Ilbiriqsiyada sheekadu waxaa ay kor u qaadayaan keydka erayada ee canugga, fahmidda akhriska iyo awoodda ah in la is cabbiro.
Waa caadi in canuggu da' hore uu ku billaabo adeegsiga intarneetka.
Carruurta yar-yar waxay badanaa daawadaan filmaanta gaagaaban. Marka carruurtu weynaato, ilaa iyo 10 sano jiryo, waxaa kordhaya ciyaaridda. Ka dibna waxaa kordhaya daneynta warbaahinta bulshada.
Beerta xilliga firaaqada
Beeraha xilliga firaaqada waxaa ka jira hawlo leh hoggaamiye xilli firaaqo oo shaqaaleysan. Halkaas waxaa ay carruurtu ku kulmi karaan waqtiga dugsiga ka bacdi. Hawlo, habeyn, galbo mowduuc leh iyo hawlo kooxeed la dhisayo, loona qorsheynayo hadba dhallinyarada baahidooda iyo waxa ay doonayaan.
Waxaa Swiidhan ka jira nolol jaaliyadeed oo xooggan oo leh jaaliyado loogu tala galay carruur iyo dad waaweyn labadaba.
Waxaa jira jaaliyado iyo naadiyo badan gudaha Iswiidhan. Waxaa jira naadiyo dhanka dhamaan xiisooyinka suurtagal ah. Naadiyo isboorti, naadiyo filim, wehelka masraxa, jaaliyadaha ciyaaraha, dhaq-dhaqaaqa sahamiska, jaaliyadaha qawmiyadaha,
jaaliyadaha ku tamashlaynta banaanka, jaaliyadaha sawirlayda iyo wax kaloo badan. Iyadoo aad ka mid ahaato jaaliyad waxaad helaysaa inaad ka qayb qaadato wax aad u aragto inay xiiso leedahay. Halkaas waxaad xitaa ku baranaysaa dad kale oo aad isku xiiso tihiin.
Sidee ayaad uga caawin kartaa carruurtaada inay helaan hawlo ay iyagu xiisaynayaan?
Ururradee ayaa ka jira degmadaada?
Ma dooni lahayd inaad ka mid noqoto urur? Waa kee haddii ay sidaas tahay?